साजिटारियस ए* ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
साजिटारियस ए* ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक
रोजिता बुद्धाचार्य || 13 May, 2022
एक पत्रकार सम्मेलनबीच खगोलविद्हरुले मिल्की वे ग्यालेक्सी को केन्द्रमा रहेको महाकाय ब्ल्याक होल साजिटारियस ए* को पहिलो तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् ।
मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा रहेको साजिटारियस ए* ब्ल्याक होलको पहिलो तस्विर
स्रोतः युरोपियन साउदर्न अब्जरभेटरी
जर्मनीस्थित युरोपियन साउदर्न अब्जरभेटरीको मुख्यालयमा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा विश्वभरका ८० भन्दा बढी विज्ञान संस्थानमा कार्यरत तीन सयभन्दा बढी वैज्ञानिकहरुको सहकार्यमा तयार गरिएको उक्त पहिलो तस्विर सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त तस्विर इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोपबाट संकलित तथ्यांकहरुको अध्ययनको उपज हो ।
नेपालबाट मिल्की वे ग्यालेक्सीको झलक
तस्विर : फुर्वा तेन्जिङ शेर्पा
प्रत्येक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी सूर्यको दर्शन गर्छौं र राती चन्द्रमाको सौन्दर्यताको साक्षी बन्छौं । अनि आकाशमा देखिने ताराहरु किन कसरी चम्केका होलान् भनी आश्चर्यचकित हुन्छौं । सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराहरुजस्तै ब्ल्याक होल पनि आकाशीय पिण्ड हुन्, जहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति वा ग्राभिटी यत्ति धेरै शक्तिशाली हुन्छ कि ब्ल्याक होलबाट उम्केर प्रकाश पनि बाहिर भाग्न सक्दैन र पिण्डहरु एकदमै खाँदिएका हुन्छन् । समान्यतयाः हामीले सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराहरु अवलोकन गर्न सक्छौं किनभने ती आकाशीय पिण्डहरुले प्रकाश परार्वतन गर्छन् । तर ब्ल्याक होलले आफ्नो वरिपरि भएका सम्पूर्ण पिण्ड मात्र होइन प्रकाशलाई समेत आफ्नो केन्द्रमा समाहित गर्ने भएकाले ब्ल्याक होलको अवलोकन गर्न सकिंदैन । त्यसैले नै यसलाई ब्ल्याक होल भनिएको हो अर्थात् यो एउटा यस्तो कालो प्वाल जसको भित्र के छ, के भइरहेको कसैलाई थाहा छैन । अनि झुक्केर पनि यदि तपाईं ब्ल्याक होलमा खस्नुभयो भने कुनै पनि हालतमा त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न । वैज्ञानिकहरु यस विश्व ब्रह्माण्डमा मुख्यतयाः तीन प्रकारका ब्ल्याक होलहरु विद्यमान भएको बताउँछन् ।
कति थरीका हुन्छन् ?
हाम्रो जीवनको उद्गमबिन्दु सूर्य, एउटा मझौला आकारको नवयुवा तारा हो र अझै अर्को ५० वर्ष सूर्य लक्का जवान नै रहनेछ । जब सूर्यभन्दा दसौं गुणा ठूलो तारा युवावस्था पार गर्दै मृत्युशैयामा पुग्छ, ती तारा ब्ल्याक होलमा परिणत हुन्छन् जसलाई स्टेलर (तारकीय) ब्ल्याक होल भनिन्छ ।
यस्ता तारकीय ब्ल्याक होल तीनदेखि दसौं गुणा सौर्यपिण्डका हुन्छन् । एकसय देखि एक हजार सौर्यपिण्डका ब्ल्याक होलहरुलाई इन्टरमेडियट (मध्यवर्ती) मासिभ ब्ल्याकहोल भनिन्छ । वैज्ञानिकहरु यस्ता ब्ल्याकहरुको खोजीमा अहोरात्र खटिरहेका छन् । यसैगरी लाखौंदेखि करौडौं सौर्यपिण्ड भएको भयंकर ठूला ब्ल्याक होल, सुपरमासिभ (महाकाय) ब्ल्याक होल हुन् । हरेक ग्यालेक्सी (आकाशगंगा) को केन्द्रमा यस्ता महाकाय ब्ल्याक होल विराजमान हुन्छन् ।
हाम्रो आफ्नो मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा पनि यस्तै एउटा महाकाय ब्ल्याक होल विराजमान छ,जसलाई साजिटारियस ए* भनेर चिनिन्छ । पृथ्वीदेखि २७ हजार प्रकाश वर्ष टाढा रहेको यस ब्ल्याक होलको पिण्ड हाम्रो सूर्यभन्दा करिब ४३ लाख गुणा बढी छ । स्मरण रहोस्, एक प्रकाश वर्ष भनेको ९४ खर्ब किलोमिटर हो । अब आफै परिकल्पना गर्नुहोस् यो ब्ल्याक कत्रो होला अनि कत्ति टाढा होला ?
साजिटारियस ए* को पहिलो तस्विरले के भन्छ ?
साजिटारियस ए* ब्ल्याक होलका विभिन्न चरणहरु
स्रोत : इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप
ब्ल्याक होलको प्रत्यक्ष अवलोकन सम्भव छैन । किनकी यसले प्रकाशलाई समेत आफ्नो घेराबाट बाहिर निस्कन दिंदैन । तर यस्ता महाकाय ब्ल्याक होल वरिपरि घुमिरहेका ताराहरु र ग्यासको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
यस्ता महाकाय ब्ल्याक होलको अत्यन्तै शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षणले गर्दा वरिपरिका ताराहरु तथा ग्यासको चालचलन, कक्ष, गति सबै भिन्नै हुन्छ । जति ठूलो ब्ल्याक होल र जत्ति यसको निकट भयो, त्यत्ति नै छिटो ती तारा र ग्यासहरुको गति हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरुले साजिटारियस ए* को वरिपरि बेजोड गतिमा घुमिरहेका ग्यासको चालचलनका आधारमा यो तस्विर तयार पारेका हुन् । तस्विरको केन्द्रमा अँध्यारो भाग देख्न सकिन्छ भने त्यसको वरिपरिको उज्यालो चक्राकार भाग चाहिं ब्ल्याक होल वरिपरि परिक्रमारत ग्यास हो ।
ब्ल्याक होलको अत्यन्तै शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षणले बांगिएको प्रकाशपथलाई यस तस्विरमा चक्राकार संरचनाका रुपमा छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ ।
यस तस्विरले दुईओटा महत्वपूर्ण विज्ञानलाई दर्शाउँछ : यसअघि मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा एउटा कुनै निकै कम्प्याक्ट अब्जेक्ट (खाँदिएको पिण्ड) को खोजवापत सन् २०२० मा प्राध्यापक वैज्ञानिक द्वय रेनहार्ड गेन्जेल र आन्द्रेया गेजलाई नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
‘पृथ्वीबाहेक अन्यत्र जीवन छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ जेम्स वेबले खोज्नेछ’ (भिडियो पनि)
यो बेग्लै कुरा हो कि उक्त पिण्ड ब्ल्याक होल नै हो भन्ने यकिन भइसकेको थिएन । तर यस तस्विरले मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा रहेको उक्त पिण्ड ब्ल्याक होल नै हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा यस तस्विरले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आजभन्दा एक सय वर्षअघि प्रतिपादन गरेका सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त (जेनेरल थियरी अफ रिलेटिभिटी) को अर्को एउटा प्रमाण र उदाहरण पेश गर्छ ।
सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्तअनुसार जसरी एउटा चारपाटे तन्नामा एउटा फलामको बल राख्दा बल भएतिर तन्ना लच्किन्छ, त्यसरी नै यो ब्रह्माण्डमा स्पेसटाइम पनि तन्ना जस्तै हो र पिण्डहरुको उपस्थितीले स्पेसटाइम फरक फरक आकारमा लच्किने अथवा बाँगिने गर्छ । जति बढी पिण्ड भयो त्यति नै बढी स्पेसटाइम रुपी तन्ना पनि लच्किन्छ । यही नै गुरुत्वाकर्षणको स्वरुप हो ।
महाकाय ब्ल्याक होल साजिटारियस ए* का कारण पनि स्पेसटाइम बाँगो वा लच्केको हुन्छ र यही कारणले यस निकट भएर जाने प्रकाश पनि पूरै बाँगिएर तस्बिरमा देखिए झैं चक्राकार आकृति बन्ने हो ।
यसरी खिचियो तस्विर
इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप
स्रोत : राडबाउ युनिभर्सिटी
रात्री आकाशमा हामीले पोखेको दूधझैं ताराहरुको लर्को देख्छौं जुन हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी हो । यस ग्यालेक्सीको केन्द्रमा रहेको साजिटारियस ए* निकै टाढा भएकाले यो, चन्द्रमाको सतहमा एउटा डुनोट (खानेकुरा) राख्दा पृथ्वीबाट जत्रो देखिन्छ, ठीक त्यत्रै आकारको देखिन्छ ।
तर यसको अवलोकन अप्टिकल (हाम्रो आँखाले देख्न सकिने) प्रकाशतरंगबाट गर्न सकिंदैन । त्यसका लागि रेडियो प्रकाशतरंगमा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस प्रयोजनका निम्ति वैज्ञानिकहरुले इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोपको डिजाइन गरेका हुन् ।
पृथ्वीको विभिन्न कुनामा रहेका अटाकामा लार्ज मिलिमिटर सबमिलिमिटर आरे (अल्मा), अटाकामा पाथफाइन्टर एकपेरीमेन्ट (एपेक्स), इराम ३० मि. टेलिस्कोप, द नदर्न एक्स्टेन्डेड मिलिमिटर आरे (नोयमा) जस्ता आठओटा रेडियो टेलिस्कोपहरुको सञ्जाल समन्वय गरी वैज्ञानिकहरुले सिंगो पृथ्वी जत्रो भर्चुअल टेलिस्कोप, इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप तयार पारे । जसरी हामी क्यामेरामा लङ एक्स्पोजरको प्रयोग गर्छौं त्यसरी नै सन् २०१७ देखि उक्त टेलिस्कोपले थुप्रै रात, थुप्रै घण्टा साजिटारियस ए* का तस्विरहरु खिचिरह्यो र जर्मनीस्थित म्याक्स प्लाङक इन्स्टिच्यूट फर रेडियो एस्ट्रोनोमीमा रहेका सुपर कम्प्युटरमा ती तस्बिरहरु जम्मा भए ।
अनि, विश्वरभरका खगोलविद्हरुले ब्ल्याकहोल सम्बन्धी विभिन्न मोडलहरु तयार पार्दै ती तस्बिरहरुसँग खेल्दै मिलाउँदै गहन अनुसन्धान पश्चात् यस अन्तिम तस्बिर हासिल गरेका हुन् ।
इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोपले यसअघि सन् २०१९ मा ब्ल्याक होलको पहिलो तस्विर सार्वजनिक गरेको थियो जसको नाम एम् ८७* हो भने मेसियर ८७ ग्यालेक्सीको केन्द्रमा रहेको उक्त ब्ल्याक होल साजिटारियस ए* भन्दा एकहजार गुणा ठूलो थियो ।
साजिटारियस ए* को तस्विर गरी अब हामीसँग जम्मा दुईवटा ब्ल्याक होलका तस्विर उपलब्ध छन् । यसका आधारमा हामी यी ब्ल्याकहोलको संरचना, गतिविधि र यसले ग्यालेक्सीको जन्म र विकासमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने अध्ययन गर्न सक्छौं ।
हामीलाई माया चाहिन्छ, मिसाइल होइन
‘मेरो बुवाले मलाई प्रश्न सोध्न सिकाउनुभयो त्यसले मलाई खगोलविद् बनायो’ (भिडियो पनि) - Mero LifeStyle Mero LifeStyle